41 O wee ruo mgbe afọ abụọ zuru ezu gwụchara na Fero nọ na-arọ nrọ,+ ma, lee, o guzo n’akụkụ osimiri Naịl. 2 Lee, ehi asaa ndị mara mma, maakwa abụba, si n’osimiri Naịl na-agbagote, ha wee na-ata ahịhịa dị n’akụkụ Naịl.+ 3 Lee, e nwere ehi asaa ọzọ ndị si n’osimiri Naịl na-agbagote mgbe ndị nke mbụ ahụ gbagotesịrị, ha jọrọ njọ ma taa ahụ́,+ ha wee guzo n’akụkụ ehi ndị ahụ nọ n’akụkụ osimiri Naịl. 4 Ehi ndị ahụ jọrọ njọ ma taa ahụ́ wee malite iri ehi asaa ahụ mara mma ma maa abụba.+ Fero wee teta.+ 5 Otú ọ dị, ụra buuru ya ọzọ, o wee rọọ nrọ nke ugboro abụọ. Lee, oko ọka* asaa mịrị n’otu okporo ọka, ha gbara agba ma dị mma.+ 6 Lee, e nwere oko ọka asaa mịrị mgbe ndị nke mbụ ahụ mịchara,+ ha fịkpọrọ afịkpọ, bụrụkwa ndị ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ mere ka ha kpọọ nkụ.+ 7 Oko ọka ndị ahụ fịkpọrọ afịkpọ wee loo oko ọka asaa ahụ gbara agba ma ju eju.+ Fero wee teta n’ụra, ma, lee, ọ bụ ná nrọ. 8 O wee ruo n’ụtụtụ na mmụọ ya ezughị ike.+ O wee zie ozi kpọọ ndị niile na-eme anwansi n’Ijipt+ na ndị amamihe ya niile,+ Fero wee kọọrọ ha nrọ ya.+ Ma e nweghị onye kọwaara Fero nrọ ndị ahụ. 9 Onyeisi ndị obu ihe ọṅụṅụ wee gwa Fero,+ sị: “Ana m ekwupụta mmehie m taa.+ 10 Fero wesoro ndị na-ejere ya ozi iwe.+ O wee tụba m n’ụlọ nga nke ụlọ onyeisi ndị nche,+ mụ na onyeisi ndị na-eme achịcha. 11 E mesịa, anyị abụọ rọrọ nrọ n’otu abalị, mụ na ya. Onye ọ bụla n’ime anyị rọrọ nrọ nke ya, nke ọ bụla nwere nkọwa nke ya.+ 12 E nwekwara otu nwa okorobịa onye Hibru+ anyị na ya nọ n’ebe ahụ bụ́ onye na-ejere onyeisi ndị nche ozi.+ Mgbe anyị kọọrọ ya nrọ anyị,+ ọ kọwaara anyị ya. Ọ kọwaara onye nke ọ bụla nrọ ya. 13 O wee ruo na dị nnọọ ka ọ kọwaara anyị, otú ahụ ka o mere. A kpọghachitere m n’ọrụ m,+ ma a kwụwara onye nke ọzọ n’osisi.”+ 14 Fero wee zie ozi kpọọ Josef,+ ka ha wee si n’ụlọ mkpọrọ kpọpụta ya ngwa ngwa.+ N’ihi ya, ọ kpụrụ isi ya na ajị agba ya,+ gbanweekwa ákwà mgbokwasị ya+ ma gakwuru Fero. 15 Fero wee sị Josef: “Arọrọ m nrọ, ma ọ dịghị onye pụrụ ịkọwa ya. Ugbu a, anụwo m ka e kwuru banyere gị na ị pụrụ ịnụ nrọ ma kọwaa ya.”+ 16 Josef wee zaa Fero, sị: “Ọ bụghị m ka ọ dị n’aka! Chineke ga-agwa Fero ihe ga-abụ maka ọdịmma ya.”+ 17 Fero wee gaa n’ihu ịsị Josef: “Ná nrọ m, lee, m guzo n’akụkụ osimiri Naịl. 18 Lee, ehi asaa mara abụba, maakwa mma, si n’osimiri Naịl na-agbagote, ha wee malite ịta ahịhịa dị n’akụkụ Naịl.+ 19 Ma, lee, e nwere ehi asaa ọzọ ndị na-agbagote mgbe ndị nke mbụ ahụ gbagotesịrị, ha na-asọ oyi, jọọ njọ nke ukwu ma taa ahụ́.+ Ahụtụbeghị m nke jọrọ njọ dị ka ha n’ala Ijipt dum. 20 Ehi ndị ahụ tara ahụ́ ma jọọ njọ wee rie ehi asaa mbụ ahụ mara abụba.+ 21 Ha wee banye n’afọ ha, ma e nweghị ike ịmata na ha banyere n’afọ ha, n’ihi na ọdịdị ha jọrọ njọ dị nnọọ ka ọ dị ná mbido.+ M wee teta. 22 “E mesịa, m hụrụ ná nrọ m, lee, e nwere oko ọka asaa mịrị n’otu okporo ọka, ha juru eju ma dị mma.+ 23 Lee, e nwekwara oko ọka asaa mịrị mgbe ndị nke mbụ ahụ mịchara, ha fịkpọrọ afịkpọ, pee mpe, bụrụkwa ndị ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ mere ka ha kpọọ nkụ.+ 24 Oko ọka ndị ahụ fịkpọrọ afịkpọ wee loo oko ọka asaa ahụ dị mma.+ M wee kọọrọ ya ndị na-eme anwansi,+ ma ọ dịghị onye kọwaara m ya.”+ 25 Josef wee sị Fero: “Nrọ Fero rọrọ bụ otu. Ihe ezi Chineke ga-eme ka ọ gwara Fero.+ 26 Ehi asaa ahụ dị mma bụ afọ asaa. N’otu aka ahụ, oko ọka asaa ahụ dị mma bụ afọ asaa. Nrọ ahụ bụ otu. 27 Ehi asaa ahụ tara ahụ́ ma jọọ njọ, bụ́ ndị gbagotere mgbe ndị nke mbụ ahụ gbagotesịrị, bụ afọ asaa; oko ọka asaa ahụ ihe na-adịghị, bụ́ ndị ifufe si n’ebe ọwụwa anyanwụ mere ka ha kpọọ nkụ,+ ga-abụ afọ asaa a ga-enwe ụnwụ.+ 28 Nke a bụ ihe m gwara Fero: Ihe ezi Chineke gaje ime ka o mere ka Fero hụ.+ 29 “Lee, afọ asaa nke a ga-enwe nri n’ụba nke ukwuu n’ala Ijipt na-abịa. 30 Ma afọ asaa nke ụnwụ ga-esochi ha, a ga-echefukwa nri niile ahụ e nwere n’ụba n’ala Ijipt, ụnwụ ahụ ga-eripịakwa nnọọ ala a.+ 31 A gaghị ama na ọ dị mgbe e nwere nri n’ụba n’ala a n’ihi ụnwụ ahụ ga-esochi, n’ihi na ọ gaje isi oké ike. 32 Na e mere ka Fero rọọ nrọ ahụ ugboro abụọ pụtara na ezi Chineke+ emewo ka ihe ahụ guzosie ike, ezi Chineke na-emekwa ọsọ ọsọ ime ya.+ 33 “Ya mere, ka Fero chọta nwoke nwere uche, nke makwaara ihe ma mee ya onyeisi ala Ijipt.+ 34 Ka Fero mee ihe ma họpụta ndị ga na-elekọta ala a,+ ọ ga-achịkọtakwa otu ụzọ n’ụzọ ise nke ihe ala Ijipt ga-emepụta n’ime afọ asaa a ga-enwe nri n’ụba.+ 35 Ka ha chịkọta ihe oriri niile a ga-enwe n’afọ ndị a dị mma, bụ́ ndị na-abịanụ, ka ha kpokọtara Fero ọka dị ka ihe oriri n’obodo dị iche iche,+ ha ga-echebekwa ya. 36 Ihe oriri ahụ ga-abụ ihe a ga na-eri n’ala a n’ime afọ asaa ahụ a ga-enwe ụnwụ, bụ́ nke ga-ada n’ala Ijipt,+ ka ụnwụ ghara ibipụ ala a.”+ 37 Ihe ahụ wee dị mma n’anya Fero nakwa n’anya ndị niile na-ejere ya ozi.+ 38 Fero wee gwa ndị na-ejere ya ozi, sị: “È nwere ike ịchọta nwoke ọzọ nke dị ka onye a mmụọ Chineke dị n’ime ya?”+ 39 E mesịa, Fero gwara Josef, sị: “Ebe ọ bụ na Chineke emewo ka ị mara ihe a dum,+ ọ dịghị onye nwere uche, nke makwaara ihe dị ka gị.+ 40 Gị onwe gị ga-abụ onye na-elekọta ụlọ m,+ ndị m niile ga na-erubekwara gị isi n’ụzọ zuru ezu.+ Ọ bụ naanị ocheeze ka m ga-eji ka gị ukwuu.”+ 41 Fero gwakwara Josef, sị: “Lee, m na-eme gị onyeisi ala Ijipt dum.”+ 42 Fero wee gbapụta mgbaaka ya e ji aka ihe akara+ wee gbanye ya Josef n’aka ma chịrị uwe e ji ákwà linin ọma dụọ yiwe ya, nyawakwa ya ihe olu ọlaedo n’olu.+ 43 O mekwara ka o jiri ụgbọ ịnyịnya ya nke abụọ kasị ùgwù gbagharịa,+ ka ha wee na-eti mkpu n’ihu ya, sị, “Avrek!”* wee si otú ahụ mee ya onyeisi ala Ijipt dum. 44 Fero gwakwara Josef, sị: “Ọ bụ m bụ Fero, ma ọ bụrụ na i nyeghị ikike, ọ dịghị onye ga-eweli aka ya ma ọ bụ zọlie ụkwụ ya n’ala Ijipt dum.+ 45 E mesịa, Fero gụrụ Josef Zafenat-pania ma kpọnye ya Asinat+ ada Pọtifera, bụ́ onye nchụàjà Ọn,+ ka ọ bụrụ nwunye ya. Josef wee malite ijegharị n’ala Ijipt.+ 46 Josef gbara afọ iri atọ+ mgbe o guzoro n’ihu Fero bụ́ eze Ijipt. Josef wee si n’ihu Fero pụọ wee gagharịa n’ala Ijipt dum. 47 N’ime afọ asaa ahụ e nwere nri n’ụba, ala ahụ mepụtara ihe nke ukwuu.+ 48 O wee na-achịkọta ihe oriri niile mere n’afọ asaa ahụ nke e nwere n’ala Ijipt, ọ na-edebekwa ihe oriri ndị ahụ n’obodo dị iche iche.+ Ọ na-ewere ihe oriri si n’ubi nke gbara otu obodo gburugburu debe n’ime obodo ahụ.+ 49 Josef wee na-ekpokọta ọka dị nnọọ ukwuu,+ dị ka ájá dị n’oké osimiri, ruo mgbe ha mesịrị kwụsị ịgụ ya ọnụ, n’ihi na a pụghị ịgụta ya ọnụ.+ 50 Tupu afọ ụnwụ ahụ eruo, a mụụrụ Josef ụmụ ndị ikom abụọ,+ bụ́ ndị Asinat ada Pọtifera bụ́ onye nchụàjà Ọn mụụrụ ya. 51 Josef wee gụọ nke ọkpara Manase,+ n’ihi na, dị ka o si kwuo, “Chineke emewo ka m chefuo nsogbu m niile nakwa ụlọ nna m dum.”+ 52 Aha ọ gụrụ nwa ya nke abụọ bụ Ifrem,+ n’ihi na, dị ka o si kwuo, “Chineke emewo ka m mụọ ọmụmụ n’ala m nọ hụjuo anya.”+ 53 Afọ asaa ahụ e nwere nri n’ụba n’ala Ijipt wee jiri nke nta nke nta gwụ,+ 54 afọ asaa nke ụnwụ wee malite, dị nnọọ ka Josef kwuru.+ Ụnwụ wee daa n’ala niile, ma ihe oriri dị n’ala Ijipt dum.+ 55 N’ikpeazụ, agụụ wee dị n’ala Ijipt dum, ndị mmadụ wee malite itiku Fero ka o nye ha ihe oriri.+ Fero wee gwa ndị Ijipt niile, sị: “Gakwurunụ Josef. Ihe ọ bụla ọ gwara unu, meenụ ya.”+ 56 Ụnwụ ahụ wee daa n’elu ụwa dum.+ Josef wee malite imeghe ebe niile e debere ọka wit n’etiti ha wee na-eresị ya ndị Ijipt,+ n’ihi na ụnwụ ahụ ji ala Ijipt aka ọjọọ. 57 Ndị si n’ụwa dum na-abịakwa n’Ijipt ịzụrụ ihe oriri n’aka Josef, n’ihi na ụnwụ ahụ ji ụwa dum aka ọjọọ.+
A matabeghị kpọmkwem ihe okwu a nke si n’asụsụ ndị Ijipt e dere otú ndị Hibru si akpọ ya pụtara.